Lordz.io - Real Time Strategy Multiplayer IO Game 1.15 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.15 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Lordz.io - Real Time Strategy Multiplayer IO Game
Lordz.io - Real Time Strategy Multiplayer IO Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Lordz.io သစ်ကို RTS တစ်စိတ်ကူးယဉ်စစ်တပ်အုပ်၌သင်တို့ကိုချပြီး, io ဂိမ်း multiplayer ပါ! သင်ဤအွန်လိုင်း multiplayer ဂိမ်းအတွက်ယှဉ်ပြိုင်အဖြစ်ကိုရွှေစုဆောင်းပြီးသင်သည်သင်၏ရန်သူများကိုအောင်နိုင်အဖြစ်သင့်တပ်ဖွဲ့များတိုးချဲ့, သင့်မဟာဗျူဟာနှင့်နည်းဗျူဟာစမ်းသပ်ရန်။
အခြားကစားသမားဆန့်ကျင်, သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအွန်လိုင်းယှဉ်ပြိုင်ဂိမ်း Play ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအထိ 20 အစစ်အမှန်ကစားသမားဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ဖို့စစ်မြေပြင်ရိုက်ထည့်ပါပြီးရင်, သင့်ကြီးမားတဲ့တပ်မတော်ထဲသို့ Knights, စစ်သားများ, Archer, မာဂုပညာရှိ, Barbarians နှင့်ပင်နဂါးစစ်သားစုဆောင်းရေး။
ဦးဆောင်သူအပေါ်အဆုံးစွန် Lordz နှင့်ရာထူး # 1 ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်သူကိုကြည့်ဖို့အခမဲ့ဘို့ငါတို့စွန့်စားမှုဂိမ်းပျော်ရွှင်ခံစားပါ! Lordz.io Download နှင့်သင့်တပ်မတော်တည်ဆောက်!
Lordz.io - Real Time Strategy Multiplayer IO Game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Lordz.io - Real Time Strategy Multiplayer IO Game အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Lordz.io - Real Time Strategy Multiplayer IO Game အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Lordz.io - Real Time Strategy Multiplayer IO Game အား အခ်က္ျပပါ
lamune စတိုး 46.45k 11.26M
Lordz.io - Real Time Strategy Multiplayer IO Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Lordz.io - Real Time Strategy Multiplayer IO Game အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.15
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.lordz.io/privacy.txt
File Size: 51.78MB
Release date: 2018-12-13 12:28:54
လက်မှတ် SHA1: 02:A7:93:5E:07:85:F6:AA:94:CF:55:41:FA:75:D6:D3:BF:23:F2:66
Lordz.io - Real Time Strategy Multiplayer IO Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ